The Unique Pink 15.38 carat nedhaimani akatengesa nokuda $ mamiriyoni 31.6
Gemological Institute of muCambodia
Pink nedhaimani, Unique Pink
Nyika guru Fancy akajeka vaaleanpunainen peya zvakaumbwa nedhaimani nokusingaperi kuuyiswa panguva okisheni pana Sotheby muna kuGeneva, ari Unique Pink izvo kutengeswa $ mamiriyoni 31.6.
matombo anokosha All uye mangoda mavara kuti kuonekwa akashama ziso kuyera ruvara ravo, sezvo wokutanga chinooneka pfungwa kunokosha. Kutora ruvara tsananguro kubva gwaro chete chete anokupa chikamu nyaya.
Pink mangoda vanogona uchambundikira siyana hues, kubva purplish kuti orangey kuti chakaita sechitsvuku, nedhaimani ichi ane inoshamisa akasimba vaaleanpunainen rinoita kuratidza zvishomanana tinge matsvuku, zvichiita zvechokwadi rakasiyana nemamwe ose. Kusiyana nevamwe mangoda chitsvuku apo Hue anokonzerwa kupindira imwe atomu zvakadai senitrogen kana Boron, pamwe Pink mangoda ruvara kunoitika nokuda kukanganiswa kana kunetseka vari sekristaro mamiriro payakafukidzwa rakaumbwa mamiriyoni emakore akapfuura.
The Unique Pink 15.38 carat nedhaimani richivezwa kubudikidza Cora International, imwe kambani inozivikanwa munyika yose hwokubereka zvisingawanzoitiki mangoda ose makuru hukuru uye dzakajeka chinoshamisira mavara. Basa rokutema uye makorari ichi mafungu nekristaro angadai akatanga mwedzi yakawanda chokusarudza sei kuti vabudirire ruvara ayo kunonyanyisa kwaniso, uye varipo chete vavezi vematombo shoma chaizvo munyika aigona kutora pamusoro dambudziko iri.
Kune chinhu yokubatwa kucheka chipi nedhaimani, uye vakatema ibwe yechitema chinotova kuoma sezvo uchida kuti ruvara hwakasimba naJehovha nokusvika kuti anopenya kubva pakati ibwe. Kana kutema mangoda chena, zvakasiyana zano kunodiwa kuvaita kutarira Hauoneki. Zvakaoma kuyera vanozokunda ruvara ane Pink nedhaimani apo kuitwa akatema pamusoro vhiri sezvo vanogona vakuchidzire kwekanguva achivafambisa kuchinja ruvara, saka aricheke haangaoni migumisiro vechokwadi kusvikira nedhaimani haachandidi pasi.
The Gemological Institute of America mamakisi angasvika vose mangoda inokosha enyika uye zvose mangoda pasi murabhoritari pagore kwete kupfuura vatatu muzana vari semhosva mangoda mavara. Asingasviki zvishanu muzana mangoda iwayo yechitema vacho rwepingi. ibwe iri riri semhosva yakakura Type IIa ndoupiko unonyanya mishonga wakachena mhando wedhaimondi inobva pamusoro nokusavapo senitrogen. maviri chete muzana mangoda zvose akatsunga ichi asina pachena.
Kunze muridzi mutsva kutenga imwe zvakasikwa rarest anokosha iye achakwanisa rename dombo, chete kuwedzera ayo akasiyana nevamwe.
Blue Diamond anotengesa nokuda $ 58 Million
Now kuwanikwa: matombo anokosha Wholesale
Angkor Auction Bangkok Bangkok Anokosha uye Jewellery Fair chikuru Diamond Blue Diamond DeBeers De Beers anokosha mabwe anokosha kubva kudenga matombo anokosha Wholesale Giant Diamond Guide kuporesa makristasi Jitendra Patel Jewellery Jubheri Ruby mavara emagariro echisikigo mukana Pink nedhaimani mitengo Royal hiakindi Ruby vanonyengedza Siem Reap Somadevi yakagadziriswa madhayamondi Zvishongo yakaisvonaka Top zvishongo kushanya Unique Pink World Record
Synthetic star sapphire: https://t.co/M8nqZ4Qd9D Via @YouTube 18 mazuva apfuura
Synthetic opal: https://t.co/gzSdlE1d5O Via @YouTube 18 mazuva apfuura
Paraiba tourmaline: https://t.co/HOicGTC6yn Via @YouTube 18 mazuva apfuura
Synthetic star ruby: https://t.co/LrskchkJGK Via @YouTube 18 mazuva apfuura